KU SOO DHAWOW NOOCYADA UGU WANAAGSAN EE SUUQYADA BASASHA - BOW
Doorashada noocyada ugu wanaagsan ee suuqyada basasha
Geedka abuurista dhulka, koritaanka iyo goosashada miraha beertaada ayaa ah waxa ugu raaxaysan. Kormeerka geedi socodka koritaanka waa wax qiimo leh. Si ay geedo dhan u koraan, waxaad u baahan tahay inaad daryeesho iyaga, laakiin waa muhiim in la doorto abuurka saxda ah. Mid ka mid ah kuwa ugu horeeya ee dhulka ku dhaco waa basal guga. Waxaa jira tiro badan oo ah noocyada khudradda ah, iyo hoos ku qoran yihiin noocyada ugu wanaagsan ee geedo basasha.
Waa muhiim! Marka aad dooranaysid, diiradda saara magaca kaliya ee noocyada, kuwaas oo go'aamiya sifooyinka ugu muhiimsan ee khudradda, laakiin sidoo kale muuqaalka muuqaalka ah ee naftooda. Waa inay ahaadaan isku mid, oo leh lakab qallalan oo engegan, oo soo saaro wax caadi ah, oo aan lahayn qudhaano ama qoyan.
Noocyo badan oo xooggan oo xoog leh marka laga eego iska caabinta fayraska iyo cudurrada kala duwan, oo aan lagu sheegi karin iska-caabbinta miraha. Khudradda ayaa hore u rusheeyaa oo si dhakhso ah ku filan: waxaad ku beeri kartaa May, waana inaad dalagaan miraha daggan 70 maalmood. Sidaa darteed, waxaa loo tixgeliyaa noocyo hore. Tilmaamaha dibedda:
qolof dahab ah oo shan dabaq ah;
miisaanka ilaa 120 g;
dhererka caleen - illaa 30 cm.
Cabbirka daroogadu waa yar yahay, maxaa yeelay waxa si dhakhso ah u qaboojin kara.
Waxay leedahay dhadhan fiiqan, oo ku habboon ilaalinta iyo isticmaalka qaasiga. Waxaad u baahan tahay inaad degto 10 cm oo isku xigta safafka, masaafada u dhaxaysa taas oo aan ka badneyn 30 cm, sida dhammaan noocyada kala duwan ee geedo basasha.
Tani waxay u egtahay waxoogaa saddex bilood ah, sidaas darteed waxaa loo yaqaannaa bartamihii xilli-ciyaareedka. "Alvina" waxay bixisaa dalag aad u wanaagsan. Beertay dhulka 5aad ee mugdiga ilaa 4 cm. Tilmaamo dibedda ah:
miisaanka 70-150 g;
gudaha guluubka cad waa midab madow.
Si aad u dhadasho khudradda ma aha mid aad u bahda, sidaas darteed waa la doorbidi karaa inay cunaan cayriin. Qulqulaha ku jira fiicnaanta wanaagsan. Nolosha shelf ee this basal waa 6-7 bilood.
Ma taqaanaa? Alvina waxaa ka mid ah tiro badan oo nafaqo ah, oo ay ku jiraan quartzin. Tilmaamahani waa in dheellitirkaasi uu awood u leeyahay inuu ka hortago muuqaalka burooyinka.
Si loo beero noocyo kala duwan waa inay ahaadaan ciidda hodan ku ah nafaqooyinka. Waxay u adkaysantaa barafka, laakiin waa inaadan bilaabin dhulka dhulka at -12 ° C. Ka hor inta beerto waxay wanaagsan tahay in lagu kululeeyo sevok ama dhulka. Ku haboon tahay soo degitaanka jiilaalka, saddex toddobaad ka hor dhaxan. Muuqaal:
qaab wareeg ah;
miisaanka - 80 g;
Cabbirka abuurka - ilaa 4 cm, qiyaasta dalagga - illaa 8 illaa 11 cm;
midabka - hooska madow ee dahabka ah.
Waxay sidoo kale xiiso u tahay in la akhriyo sida loo kobciyo noocyada kale ee basasha si sax ah: basbeel, basbaar, basbaar, basbaal, jajab, basasha, basal lagu qurxiyo, basasha Indian.
Inside waa mid aad u casiir leh. Si aad u dhadhamiso waxa iska leh noocyo macaan, laakiin waxaa jira boog aad u fudud. Ku habboon goynta, nadiifinta nadiifinta. Fikrad ahaan labadaba ha ahaato mid qoyan iyo shiilan ama ilaalin. Waxaa lagu kaydiyaa guriga muddo dheer, ma aha wax sii xumaanaya.
Waa jaalaha cagaaran - isku dhafan xulashada Dutch-ka, wuxuu leeyahay qaabka ugu maaxsan ee noocyada kale. Xaaladaha qallalan, waxaa lagu kaydiyaa muddo ka badan noocyada kale. Tilmaamaha dhadhanka waa qandaraas yar oo fudud, taas oo siinaysa faa'iido kale oo kala duwan. Nalalka waxay ka kooban yihiin xidigo aad u xoogan oo qoto dheer. Sababtoo ah abaartan ma awoodi doonto inay dilaan geedka. Daawooyinka darajada leh wax soo saarka sare iyo iska caabinta fayraska.
Waa muhiim! Basasha ayaa "Hercules" ku jirta hal mitir oo laba jibbaaran oo beereed ah ayaa keena ilaa 8 kg oo dalagga ah, marka loo eego ehelkiisa uusan ku faani karin.
Goobidda waxaa la samayn karaa xilliga dayrta, marka uusan lahayn baraf. Heerkulka ugu fiicani waa +10 ° C Yamaaruggu wuxuu ka wanaagsan yahay in uusan mar kale buuxin biyo. Ka dib dhan, haddii aad ka badan tahay heerka qoyaanka, ka dibna khudradda lama kaydin doono muddo dheer oo si dhakhso ah u qudhmi.
Noocyada noocan ah ee bartamihii dhexe waxaa lagu ridayaa Ruushka. Waxaa ku jira liiska noocyo cusub oo ka mid ah geedo basasha. Markii hore, waxa la soo bandhigay oo keliya qaabka abuurka. Aad u dheer oo si fiican u haya jiilaalka. Waxay leedahay qaab isku dhafan oo midabkiisu yahay midab, mararka qaarkoodna hooska iftiin ah. Miisaanka waa weyn - ilaa 200 g. Waxaa lagula talinayaa in dhulka dhulka la gashado oo la gooyo. Tani waxaa la samayn karaa Abriil iyo horraantii Maajo, iyo dhammaadka July, beergooyinku waxay noqon doonaan ilaa 5 kg halkii mitir labajibbaaran.
Tani waa mid ka mid ah noocyada Holland ee geedo basbaas, oo dhawaan la bilaabay in lagu soo dhoofiyo dalkeena. Isla mar ahaantaana wuxuu aad u jecel yahay. Mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda waa heerka dillaaca, taas oo u dhaxaysa 75 ilaa 85 maalmood. Caadi ahaan waxaa loo wareejiyaa kaydinta xilliga qaboobaha. Iyadoo mitirka laba jibbaaran, waxaad heleysaa, ugu fiican, ilaa 2.5 kg dalagga. Guluubku wuxuu miisaankoodu yahay ilaa 80 g celcelis ahaan, laakiin si fiican loo beeray, ciid wanaagsan iyo xaalado wanaagsan, waxay u badan tahay in la helo guluub culeyskiisu yahay 120 g. "Carmen" oo kale ayaa leh midab casaan ah iyo qaabka loo yaqaan "elipsoid". Gudaha midabka ayaa xitaa ka buuxa, midabka madow. Dhadhanka fiican waa:
wuxuu leeyahay caraf udgoon.
Sidaa darteed, waxaa lagu daraa salad cusub. Khudraddani waxay faa'iido u leedahay dadka qaba kolestaroolka hooseeya ee isticmaalka joogtada ah.
Qalabka baska ee Corrado waa mid aad u caan ah, sharaxaad kala duwan oo loo yareeyn karo dhowr waxyaalood faa'iidooyinka:
oo loo kaydiyey sannaddii oo dhan, ilaa goosashada;
kala duwanaanta hore - maraqa laga bilaabo 73 ilaa 93 maalmood;
wuxuu siinayaa goosashada weyn ee xasilloon.
Kaydinta muddada dheer waxaa lagu guuleeystaa adoo heysta kabo badan oo cufan. Waxaa muhiim ah in lagu kaydiyo qol leh wareegga hawada ee heerkulka aan ka hooseeyn 15 ° C. In midabka - dahab leh brown, guluubka miisaankiisu yahay ilaa 130 g, iyo dhadhanka - semi-fiiqan.
Tani waa nooca ugu horeeya ee abuurka basasha, caadi ahaan waxay u dulqaadanayaan guga qabowga. Marka, dhammaadka May, waxaad soo qaadan kartaa khudaarta. Waa lagama maarmaan in si joogto ah biyaha loo daboolo oo dhulka loo daboolo. Daryeel wanaagsan iyo hodan ku ah ciidda macdanta ayaa kuu keeni doona dalag ah ilaa 3 kg mitir labajibbaaran.
Gaariga dhabta ah ee fitamiin C, "Red Baron" ayaa isku muujiyay in jikada, gaar ahaan saladh. Cooks waxay doorbidaan noocyada kala duwan ee dhadhanka dhadhanka ah iyo waqtiga dheer ee kaydinta. Waa guduud midab madow, qaab wareegsan, dhexdhexaad ah oo casiir leh oo cufan gudaha.
Basasha ayaa "Red Baron", sharaxaad ka duwan noocyada kala duwan oo ka hadlaya dhalidda sare, waxqabadka iyo adeegsiga, waxaa lagu beeray beerta cirifka dhexe.
Kala duwanaanta noocaas ah ee basasha waa hore iyo keenista wanaagsan goosashada saddex bilood ka dib markii laga beerto soo dejinta, taas oo taas aad u badan qadarin. Degganaashu wuxuu ka kooban yahay 3 kg halkii mitir labajibbaaran. Waxaa la beeray guga marka heerkulku aanu hoos u dhigin 10 ° C. Muddadan, ciidda waa qoyan, taas oo ah waxa Roseanna u baahan yahay. Beerto xilliga dayrta waa suurta galka saddex toddobaad ka hor bilowga bilawga ah ee dhaxan. Si aad u dhadasho khudradda waa mid dhexdhexaad ah, cad, cufan iyo casiir leh gudaha. Basasha dibedda waxaa lagu daboolay kabaha casaan.
Rosanna waxay ku jirtaa liiska noocyada caanka ah ee geedo basbaas sababtoo ah size. Basasha wareega waa weyn, oo leh dhexroor dhexdhexaad ah oo ah 8 cm.
Noocyada wareegsan ee miisaankoodu yahay miisaankoodu yahay 100 ilaa 120 g waxay leeyihiin kabo bunni ah, kuwaas oo daboolaya casiir cad oo gudaha ah dhadhan adag. Beeridda waxaa la sameeyey May ee ciida bacriminta iyo waxay sugayaan bisha July, marka ay suurtogal tahay in la goosan - ilaa 5 kg hal mitir oo laba jibaaran oo dhul ah. Fasaxyada waxay u dulqaadanayaan xaaladaha cimilada xun. Tayada noocan oo kale ah waa mid aad u cajaa'ib leh, taas oo ay ugu wacan tahay nooca Rumba baska uu noqday mid aad u caan ah.
Qalabkani waa mid aad u caan ah oo dadka ka mid ah, celcelis ahaanna wuxuu ku jiraa 60 maalmood.
Si goos goos ah, waxay ku beeri basasha dayrta iyo sida ugu horreysa qeybta labaad ee May waxay ka geli karaan. Intaa waxaa dheer, in hore u bislaaday, basasha baal badani waxay u adkaystaan ​​cudurada iyo cayayaanka.
Qaabku waa wareegsan yahay waana siman yahay. Miisaanka waa yar yahay, ilaa 60 g. Basasha dhadhanka yar yartaas oo lagu qadariyo jikada. Kaydiyo 6 bilood goosashada goosashada kuleyl diirimaad joogto ah. Haddii xaaladda aan la gaarin, fallaadh ayaa u muuqda.
Kala duwan ee geedo basasha "Sturon" - waa ikhtiyaar "Stuttgarter Riesen," laakiin leh tayada ugu fiican. Nalbigooda way ka duwan yihiin. "Sturon" waxay leedahay qaab wareeg ah, oo aan ku habboonayn qaabka. Midabka Husk waa mid bunni ah, sida horey u ahaa. Hagid u ah sii kordhaya ee gobollada inta badan sanadka qabow. Uusan u jilicsanayn si fiican oo loo hayo. Tilmaamuhu waa inuu hore u soo celiyo, "Stuttgarter Riesen" ilaa 12 cisho ah oo keenaya miro fiican.
Tani waa wakiil ka mid ah basasha caadiga ah ee kabaha brown. Laakiin dhadhankiisu ma aha mid si tartiib tartiib ah, yar yar. Waxay ku kala duwan tahay daryeel la'aan iyo nolol waqti dheer, iyada oo aan lumin ay dhadhanka. Xididgu maaha mid ka yaryar noocyo kale oo 5kg ah halkii mitir labajibbaaran. Thanks to tayadaas, "Chalcedony" marnaba kama tagi doono isticmaalka wadarta, sababtoo ah way adag tahay in la qiyaaso xilliga qaboobaha iyada oo aan qaanuun caadi ahayn.
Dibedda ka duwan kuwa kale, sababtoo ah waxay leedahay qaab ukun ah. Midabka caanaha waa mid hurdi ah. Waxay dhadhamisaa aad u macaan. Muujinta ugu weyn waa wax-soo-saarka. "Centurion", oo ay weheliyaan "Hercules", waxay awoodaan inay keenaan 8 kg oo basasha mitir labajibbaaran.
Sida laga soo xigtay sifooyinka, ka mid ah ee bannaanka u, kala duwan tani waxaa loo tixgeliyaa inay tahay tayo aad u sarreeya oo lagu kalsoonaan karo. Saddex bilood ka dib markaad beerto, waad goosan kartaa goosashada wanaagsan. Alaabta ku hay meel qabow, laakiin leh wareegga hawada.
Wadajir ahaan "Sturon", "Hercules" iyo "Centurion" ayaa lagu daray liiska noocyada ugu fiican ee geedo basasha ee kooxda dhexe. "Stuttgarter Riesen" horaan, u adkaysata guga qabow. Waxay leedahay doorbid kale sifooyinka:
wax yar oo bukaanka ah, laakiin dhadhanka waa mid aad u fiican;
miisaanka laga bilaabo 150 illaa 300 garaam, tani waa qiimo aad u fiican ee basasha;
Bisaylkiisa ilaa 90 maalmood.
Dibedda, waxay leedahay qaab dabaqeed ama qaab caadi ah. Waxay ka kooban tahay badanaa ascorbic acid. Nolosha shafka ee basasha waa mid aad u weyn. Kala duwanaanta noocaas ah waxay asaas u tahay xulashada noocyo badan oo cusub oo horumar leh.
Ma taqaanaa? Beeraleyga Peter Glazebrook laga bilaabo UK waxay ku guulaysatay inay koraan baska ugu weyn dunida - ilaa 8.2 kg!
Waxay tilmaamaysaa noocyada cusub ee farsamada. Foomka - ka sareeyaa. Intaa waxaa dheer, miisaanka nalka waa mid aad u ballaaran - ilaa 300 g. Dhulka ayaa la fuliyaa guga, marka dhaxan waa la tegey, iyo goosashada - horaantii July. Qaansada way kala duwan tahay xawaaraha koritaankiisa, iyo sidoo kale xididada xooggan oo dheer, oo ka ilaaliya abaarta. Husk iftiin madow. Kala duwan tani waxay leedahay dhadhan jilicsan oo leh nadiif yar. Sidaa darteed, waxaa badanaa loo isticmaalaa salad cusub.
Dabcan, oo leh noocyo kala duwan oo geedo basasha, waa adag tahay in la fahmo kuwaas oo kala duwan oo ka fiican. Xagga sare, fursadaha ku habboon ayaa loo soo bandhigay meelaha leh qaboobaha qaboobaha iyo kuwa dheer. Intaa waxaa dheer, dhammaan noocyada leeyihiin muuqaal guud - waxay u adkaystaan ​​cayayaanka iyo cudurada kala duwan.
Waa muhiim! Haddii ay roobabku ku badan yihiin gobolka, ama sannadka waa roob, ka dibna daaweyn dheeraad ah ee warshadda laga helo bakteeriyada ayaa faa'iido leh.